Nomery 24: 1-25
Nomery 23 Nomery 24 Nomery 25
Ary rehefa hitan'i Balama fa sitrak'i Jehovah ny hitahy ny Isiraely, dia tsy nandeha tahaka ny teo hanao sikidy intsony izy, fa nitodika nanatrika ny efitra fotsiny.
Dia natopin'i Balama ny masony, ka nahita ny Isiraely mitoby araka ny fireneny izy; ary ny Fanahin'Andriamanitra tonga tamin'i Balama.
Dia nanao oha-teny izy ka nilaza hoe: Hoy Balama, zanak'i Beora, Dia ny lehilahy izay voakimpy[Na: voahiratra.] ny masony,
Izay mandre ny tenin'Andriamanitra Sady mahita fahitana avy amin'ny Tsitoha, Torana, kanefa voahiratra ny masony:
Endrey ny hatsaran'ny lainao, ry Jakoba ô! Sy ny lasinao, ry Isiraely ô!
Tahaka ny lohasaha malalaka, Tahaka ny saha ao amoron'ny ony, Tahaka ny hazo manitra[Heb. ahalima.] nambolen'i Jehovah, Tahaka ny hazo sedera ao amoron-drano.
Hisy rano mandeha avy eo amin'ny sininy, Ary ny taranany ho any amoron'ny renirano maro. Hisandratra noho Agaga ny mpanjakany, Ary handroso voninahitra ny fanjakany.
Nentin'Andriamanitra nivoaka avy tany Egypta izy. Ary manan-kery toy ny ombimanga;[Na: tandroka.] Handany ny jentilisa fahavalony izy, Ka hotapatapahiny ny taolany, Ary haripany amin'ny zana-tsipìkany.
Mamitsaka izy, mandry toy ny liona, Ary toy ny liom-bavy, ka iza no hanaitra azy? Hohasoavina anie izay manisy soa anao, Ary ho voaozona anie izay manozona anao!
Dia nirehitra tamin'i Balama ny fahatezeran'i Balaka, ka niteha-tànana izy; dia hoy izy tamin'i Balama: Hanozona ny fahavaloko no niantsoako anao, kanjo efa nitso-drano azy intelo hianao izao.
Koa ankehitriny, mandosira ho any amin'ny fonenanao hianao. Hoy izaho teo: Hanome voninahitra anao tokoa aho; fa, indro, Jehovah efa nisakana anao tsy hahazo voninahitra.
Dia hoy Balama tamin'i Balaka: Moa tsy efa nilaza tamin'ny irakao izay nirahinao tamiko va aho ka nanao hoe:
Na dia homen'i Balaka volafotsy sy volamena eran'ny tranony aza aho, dia tsy mahazo manoatra ny didin'i Jehovah, na hanao soa, na hanao ratsy, avy amin'ny saiko; izay holazain'i Jehovah ihany no holazaiko?
Ary ankehitriny, indro, efa handeha ho any amin'ny fireneko aho, dia aoka hananatra anao aho ny amin'izay hataon'ity firenena ity amin'ny vahoakanao any am-parany.
Dia nanao oha-teny izy ka nilaza hoe: Hoy Balama, zanak'i Beora, Dia ny lehilahy izay voakimpy[Na: voahiratra.] ny masony;
Izay mandre ny tenin'Andriamanitra Sady mahalala ny fahalalan'ny Avo Indrindra, Izay mahita fahitana avy amin'ny Tsitoha, Torana, kanefa voahiratra ny masony:
Hitako Izy, nefa tsy ankehitriny; Tazako Izy, nefa tsy akaiky; Misy kintana miseho avy amin'i Jakoba Sy tehim-panjakana miposaka avy amin'ny Isiraely Ka mandrava ny sisin-tanin'i Moaba Ary mandringana ny mpitabataba[Na: ny taranak'i Seta.] rehetra.
Edoma sy Seïra fahavalony dia samy lasany ho azy, Ary ny Isiraely mandroso amin-kery.
Ary avy amin'i Jakoba no isehoan'Izay hanapaka Ka handringana izay sisa avy ao an-tanàna.
Ary nahita ny Amalekita izy, dia nanao oha-teny hoe: Voalohany amin'ny jentilisa Amaleka, Fa ho lany ringana no hiafarany.
Ary nahita ny Kenita izy, dia nanao oha-teny hoe: Mafy orina ny fonenanao, Ary atao amin'ny vatolampy ny akaninao.
Kanefa ho ringana[Na: tsy ho ringana.] Kaina, Alohan'ny hamaboan'i Asyra anao.
Dia nanao oha-teny koa izy ka nilaza hoe: Indrisy! iza no ho velona, raha manao izany Andriamanitra?
Ary hisy sambo avy any amin'ny tany Kitima, Ka hampietry an'i Asyra sy Ebera, Ka ho lany ringana no hiafarany.
Dia niainga Balama ka lasa nody tany amin'ny fonenany; fa Balaka kosa nandeha tany amin'izay nalehany.